October | 2015 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
TQ Ko Aung and Dr Theka Moe Nyo
October 31, 2015 drkokogyi
Ko Aung Nilai
October 31, 2015 October 31, 2015 drkokogyi
The Conference of the Parliament of the World’s Religions, Salt Lake City, Utah, USA 18 Oct. 2015.
Wirathu has used the vulgar words and scolded Ms Yanghee Lee, Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar and threatened to assault with the CLOG or WOODEN SLIPPERS
Myanmar’s NOTORIOUS monk Wirathu has used the vulgar words and scolded Ms Yanghee, Lee, Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar and threatened to assault with the CLOG or WOODEN SLIPPERS.
Please read his statement in Myanmar:
“ခုံဖိနပ်နှင့်ပဲ တန်တဲ့ မိန်းမ”
မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ်များဌာနခွဲသည် အရှေ့တောင်အာရှဒေသနိုင်ငံများအကြောင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ်များ ဌာနငယ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
နှစ်ပေါင်းအတန်ကြာမျှ မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ်များသုတေသီတစ်ဦးအနေဖြင့် လုပ်ခဲ့ဖူးသော မိမိ၏အတွေ့ အကြုံအရ နိုင်ငံတကာသုတေသနစာပေများတွင် အဆိုပါ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအကြောင်း ရေးသားတင်ပြမှုများ၌ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့အကြောင်းကိုသာ အများအပြားတွေ့ရပြီး အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့၏ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဘာ သာစကားများကို အလေးပေးရေးသားထားကြသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စာပေ၊ ဘာသာစကားတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော စာအုပ်စာတမ်းများကို များများစားစား မတွေ့ရချေ။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာ ပညာရပ်စာပေနယ်ပယ်၌ အနည်းငယ်မျှသာရှိသော မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း ရေးသားထားသည့် စာအုပ်စာတမ်းများတွင် အချို့သော အချက်အလက် များသည် မှားယွင်းနေသည်။ အချို့သော အချက်အလက်များမှာ တိကျမှုမရှိ၊ အချို့သော အချက်အလက်များကိုအဓိပ္ပါယ် လွဲမှားစွာ ရေးသားတင်ပြထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အဆိုပါစာအုပ်စာတမ်းများထမှဲ မှားယွင်းသော(သို့) လိုရာ ဆွဲတင်ပြထားသော အချက်အလက်များကို ထပ်ဆင့်လေ့လာရေးသားသူများက မှီငြမ်းကိုးကား ရေးသားတင်ပြမှုများ ရှိလာ သည့်အခါ အများညီ ဤကို ကျွဲဟုဖတ်ဆိုသည့်ကိန်းမျိုး ဆိုက်လုနီးနီး ဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရပါသဖြင့် မှန်ကန်တိကျသော အချက်အလက်များဖြင့် ချေပရေးသားရမည့် အခြေအနေသို့ ဆိုက်ရောက်လာခဲ့ပါတော့သည်။
Myanmar Muslim Media shared VOA
ကိုဇော်ဝင်းလှိုင် အောက်တိုဘာ ၃၁
မွတ်စ်တွေလည်းး အတိုင်းအတာတခုထိ သည်းခံကြပါလိမ့်မယ်… မခံနိုင်တဲ့ အဆုံးတနေ့ ပေါက်ကွဲတာနဲ့ မြန်မာပြည် သွေးချောင်းစီးပါလိမ့်မယ်
October 30, 2015 drkokogyi
ပါရာဇိက ကျမကျဆိုတာလည်းးး သူရို့အလုပ်ပါပဲ
ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်တွေ စိတ်ပူရမယ့် ကိစ္စပါပဲ… လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ယုံကြည်ပိုင်ခွင့် ဆိုတဲ့ အခြေခံဥပဒေကို ချိုးဖောက်ရာ ရောက်သတဲ့လားးး state sponsor လေ …
ဘာလုပ်လုပ် ဥပဒေမှ မရှိတာ…
လူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်း အပိုဒ် ၁၈ ချိုးဖောက်သတဲ့လားးး
အမျိုးသားရေးထက် ဘာလု့အခွင့်အရေးမှ မကြည့်နိုင်ဘူး ဆိုသူတွေ များမှများးး
ထားပါတော့လေ… state sponsor ကြောင့် နေရာတကာ စော်ကားနှိမ့်ချဖို့ ကြိုးစားခဲ့သူတွေဟာ … တဖြည်းဖြည်းး နောက်များး လူပေါ်လူဇော် လုပ်ရတာ အနိုင်ကျင့်
မီးမွှေးခဲ့သူ ဘယ်သူလဲဆိုတာ သိကြပါတယ်
October 30, 2015 October 30, 2015 drkokogyi
မီးမွှေးခဲ့သူ ဘယ်သူလဲဆိုတာ စာတတ်သူတိုင်း သိကြပါတယ်
M-Media အောက်တိုဘာ ၃၀ ၊ ၂၀၁၅
သူ့အမြင်ကဏ္ဍ ဆောင်းပါးရှင် – ဒန်ငြာရှိန်း